Horumarinta Barnaamijka: Waa Maxay Hookaha? - ITS Tech School
Horumarinta Barnaamijka: Waa Maxay Hookaha?
Qalabka loo yaqaan "Designs Patterns"
Habka Wareegga Miiska Dhaqanka
Mararka qaarkood la cuno
Waa inaan ogaano qiyaastii noocyada kala duwan ee Hookaha.
Waa maxay Hook?Horumarinta barnaamijka, Hoosinta waa fekrado u ogolaanaya beddelidda dhaqanka barnaamijka. Aqoonsiga suurtogalka ah ayaa ku siinaya inaad bedesho anshaxa koowaad ee wax aan adigoon badalin xeerka fasalka la barbardhigo. Tani waxaa lagu dhammeeyaa iyadoo la marinayo istaraatijiyada istiraatiijiyada.
Noocaan noocaan ah ayaa aad u caawin kara marka laga eego kicinta shaqooyinka cusub ee codsiyada, marka lagu daro dhiirigelinta xidhiidhka ka dhexeeya hababka kale iyo farriimaha nidaamka. Kooluhu waxay u muuqdaan in la yareeyo nidaamka fulinta iyada oo la ballaarinayo xajinta diyaarinta ee nidaamku u baahan yahay si uu u guto fariin kasta. Waa in la soo bandhigo oo keliya marka loo baahdo oo laga baxo fursadda ugu horreysa.
Ka fikir inaad isticmaasho Nidaamka Maareynta Macaamiisha (CMS) oo ka baxsan dibedda waxaadna u baahan kartaa madaxa fulinta super in laguugu soo diro email markasta mar kale boosteejo kale oo loo qaybiyo iyo in dhaqankani aanu ahayn qadarka qalabka. Waxaa jiri lahaa wadooyin dhowr ah oo horay loo soo maro:
Isbeddelka CMS waa inaan lagu fekerin akhri, ka dib marka lagu daro dib-u-cusbooneysiinta qalabkan waxaad hor-istaagi doontaa dhibaatada ah inaad lumiso isbedelkaaga ama aanad awood u lahayn inaad sii wadato wax walba oo la cusbooneysiiyo;
Samee CMS ga gaar ah waa fikrad aad u xun, waxkasta oo la tixgeliyey, ma haysatid tamar kugu filan ama hanti ku filan si aad u sameyso waxyaabo cusub ama xitaa la sii wado waxa la soo saaro;
Sahameyso suurtogalnimada isticmaalka jiirarka, taas oo ah, hubso in CMS ay eegayso qaybaha dibadda ama qaybaha loogu talagalay walxaha magaca la bixiyay si loo fuliyo daqiiqada la jiido, xaaladaas, qaybinta posts cusub.
Qaybta hoose ee dhulka ee isticmaalka qabsashadu waxay guud ahaan ka soo jeeda qalabka si loo isticmaalo qalabka. Mabda'a ku habboon ee jibbaaradu maaha in la baddalo koodhka koowaad. Dhammaan buug-gacmeedyada waaweyn ee dhammaan qalabka furan ee furan oo cusbooneysiiya mantra oo dib u habaynaya laftiisa ma badalo xarunta. Hase yeeshe, samaynta niyadjab aan la qiyaasi karin, shakhsi kasta oo yimaada si uu u qaboojiyo maskaxda kama fekerayo isbedelka, iyo qofka si khaas ah ugala hadlo waa adiga, ma aha qalabka.
Baaxad-darradu waa aragtida kale ee la door-bidayo isticmaalka istaraatiijiyadaha hookada oo u oggolaanaya codsiga in la kordhiyo dhexdhexaadinteeda deggan. Istaraatiijiyadaha naqshadeeynta isku xirka dhexdhexaadinta iyo habdhismeedka meelo kala duwan oo ka soo bixi kara dejinta codsiga meel gaar ah.
Solutions Technologies Innovative wuxuu bixiyaa Tababarka Horumarinta Barnaamijka ee Gurgaon, Delhi NCR ee Hindiya.
Waa wax xiiso leh in la ogaado in naqshado badan oo (dhammaan) naqshadaha muuqaalku ay sharaxayaan semantics for hooks. Waxay la hadlaan sida loo fuliyo nidaamyada hoose ee meelaha dhibaatada ah. Qaar waxay kuxiraan xukunka xakamaynta: Abstract, Factory, Dhisme, Taliye, Turjubaan, Dabagal, Prototype, Gobolka, iyo Istaraatiijiyada.
Kuwa kale ee labadaba tusaaleyaal isku mid ah iyo horumarka qaybinta: Habka Habka iyo Baadilka.
Semantics waxaa sida caadiga ah lagu wargeliyaa magaca farsamada gogolka (tusaale ahaan, amarka, istaraatiijiyadda waxaa lagu magacaabaa fulinta ()).
Horumarinta Barnaamijka - Waa maxay farsamooyinka Hook - Point 1Virtual waxaa loo keenay waddo aan la garanayn ah oo ka socota istaraatijiyado xaalad ah, laakiin maadaama farsamooyinka farsamada la badali karo, kooxdu ma ogaanayso cinwaanka awoodda khaaska ah marka aad ku qorto koodhkaaga. Wadaagistu, sidaas darteed, wuxuu isu uruuriyaa Habraaca Maarmaanka Wacan (VMT), kaas oo siinaya hab lagu baadho cinwaanada awoodda runtime. Istaraatijiyad kasta oo isku-dhafan ayaa la hawlgeliyaa xilliga runtime iyada oo loo marayo VMT. VMT ee su'aal waxay ka kooban tahay dhammaan istaraatiijiyadaha wacyigalinta ee horjoogayaasha, iyo weliba kuwa ay ku dhawaaqayaan. Sidaa daraadeed, farsamooyinka wijiga ah ayaa ka faa'iideysta xeelado badan marka loo eego istaraatiijiyada xalka, inkastoo xaqiiqda ah inay sii wado xawaaraha.
Maadaama VMT ay tahay miis ay ku jiraan dhibcoodayaasha leh cinwaannada xasuusta ee kartida interface, waxa waa in la sameeyaa waa in la ciribtiro cinwaanka xasuusta ugu horreysa adoo cinwaanka ka shaqeynaya sharciyeynta sharciga ah. Khadadkaas oo dhan, farsamooyinka loo yaqaan 'loo yaqaan' ayaa lagu qori doonaa, iyo habdhaqanka cusub ee loo yaqaan 'capacity' ayaa la fulin doonaa.
Horumarinta Barnaamijka - Waa maxay Xirmada - Point 2Heerka Xakamaynta API ayaa dhab ahaantii kuu fasaxaya inaad dib u soo ceshato qaybaha nidaamka shaqada. Iyada oo awoodda aad u leedahay in aad qabato eedeymahaas, waxaad bedeli kartaa soodhaweyntooda iyagoo bedelaya waxqabadka la qaban lahaa marka hore.
Waxay u egtahay, tusaale ahaan, in la mamnuuco rikoodh gaar ah, ka codso inuu socdo, oo uu dalbado kalsoonida macmiilka inuu ku keydiyo aruurinta goobada, iyo cetera.
Dhab ahaan, go'aanka ugu wayn ee go'aanku wuxuu ku jiraa gobolka amniga, tusaale ahaan, antivirus iyo antispyware. Noqoshada, sida xaaladdu tahay, waxaa jira xaalado horumarineed oo caadi ah halkaas oo Hibada API, oo noqon karta habka ugu muhiimsan.
Kombiyuutarka Barnaamijka Isku-dubbarididda, xaaladeena gaarka ah, waxay ka tarjumeysaa helitaanka API-ka OS, ama DLL kasta, iyo bedelida xukunkiisa caadiga ah meel kale, oo dhan si sax ah, awoodda kale. Waxaa jira asal ahaan labo wajood:
EAT iyo IAT: dhammaan EXE / DLL oo dhan waxay ka kooban yihiin API si loo qaado jaantusyada. Jadwalladan waxay ku jiraan tusayaal tilmaamaya API Entry Point. Adoo bedelaya tilmaameeyaashan, iyaga oo tusaya tilmaamkayaga, waxaanu heynaa. Noqo sida tan, haddii EXE / DLL aysan soo dhoofin API, istiraatiijiyadani ma shaqeyn doonto;
Xeerka tooska ah ee ku qoran qoraalka: Sida horay loo sheegay, marka ay dhacdo in ay u muuqan karto in lagu daro wicitaan ku saabsan dib-u-soo-celinta bilawga codka API, waxaynu "karnaa", oo awooddeenna aan ku socono wax kasta oo lagu magacaabo API. Noqo maxaa yeelay, waxaa laga yaabaa in ay jirto arrin: haddii ka dib markii aan leenahay koodhadhka, waxaan u baahannahay inaan wacno API-da koowaad, waxaan ku soo noqoneynaa dib-u-soo-celinteenna, daadadkuna waa la abuuri doonaa. Hal qorshe ayaa hagaajinaya jebinta si uu u yeesho karti uu ugu wici karo API, dib u tijaabinta markii la fuliyo. Noqo sida ay u dhici karto, iyada oo la joogo dhulkaas, dhowr wicitaano API ah ayaa la samayn karaa mana sameyn karo dib u soo noqoshadeenna;
Inline Hook waa qodobka aan heleyno tilmaamaha aasaasiga ah ee awoodda, waxaanu u ganacsaneynaa Jump, Push ama Wicitaan loogu talagalay awooddeena.
Akhriska qoraalka: Nidaamka shaqada ee Windows waxaa intaa sii dheer hoos u dhigaya API. Waa inaan ogaanaa sida loo isticmaalo API API.
Horumarinta Barnaamijka - Waa maxay Xirmada 3As-ga ee farsamooyinka naqshadeynta dhexdhexaadinta iyo dhaqanka meelo kala duwan oo ka soo bixi kara dejinta codsiga meel gaar ah waxay dhacdaa dib u dhac ku yimid xakamaynta. Walxaha macaamilada macaamiladu waxay wax ka bedelaan tallaabooyinka udiyaarka Dhammaadka maalinta, marka munaasabadu dhacdo, gacanqaadayaasha ayaa ka jawaabaya istiraatiijiyadaha hookada ku saabsan walxaha horay u diiwaangashan kuwaas oo fulin doona munaasabad gaar ah oo diyaarinaya waxqabadyo. Xaaladaha dhacdooyinka: farriimaha daaqada, xirmooyinka ka soo baxa dekadaha waraaqaha.
Barnaamijka Horumarinta - Waa maxay Nidaamka Hook - Point-ka 4Each ee Windows waxay leedahay miis lagu magacaabo Miiska Cinwaanka Iqda, (IAT), kuwaas oo dukaamada ku kaydiya awoodaha ay DLLs ee nidaamka kasta oo loo diro. Jadwalkani waxa uu si tartiib ah u soo degay cinwaanka qaybaha DLL ee xilliga ku siman.
Isticmaalka awoodda gaar ahaaneed, waxaan ka dhigi karnaa miiska IAT-ga qoraaga, oo noqon kara mid u muuqda inuu bedelayo cinwaanka cinwaanka awooda caadada ah, dib-u-dhajinta miiska marka la akhriyo-wax yar kadib is-beddelkan. Waqtiga goorta habsocodku isku dayo inuu waco awoodda, cinwaankiisa waxaa laga helayaa miiska IAT, iyo tilmaame ayaa la soo celiyaa. Iyada oo miisaanka IAT waa la beddelay, awoodda caadada ah ayaa la keenay qaabka ugu horreeya ee kumbuyuutarka loo adeegsado hanaanka.
Horumarinta Barnaamijka - Waa maxay Xirmada - Point 5Netfilter waa nidaam hoose oo liiska Linux ah oo ka badan kan 2.4. Waxay u xilsaaran tahay kala soocista xirmooyinka, NAT, dab-damis, dib u habeyn, iyo kuwo kale. Netfilter waa mid si ballaaran u fidi kara, iyo dukumentigiisana waa la dhammeeyaa. Waxay ka baxaysaa suurtogalnimada isticmaalka Hook ee koodhka cirifka, taasoo ka dhigaysa in la isticmaalo si aad u jilicsan oo guud ahaanna ay helaan kooxda. Hooks Kuwani waxay ka baxaan dhowr natiijooyin la isku halleyn karo waxana ay buuxin karaan sidii kiciyayaal wakhti gaar ah.
Horumarinta Software - Waa maxay gabagabada - Hanaanka barnaamijka hanuuninta ayaa ah mid taabogal ah oo furaya baaxadda natiijooyinka la taaban karo ee injineerada software, si kastaba ha ahaatee waa in la adeegsadaa feejignaan tan iyo markii ay ku jiraan xiisad aad u sareysa oo ku jirta habka socodka iyo bedelka koowaad habdhaqanka OS, codsiyada ama qaybaha kale ee software, taas oo adkeyneysa in la fahmo fikradda software-ka. Wax kale oo aan ahayn, sida ku xusan qodobkan ka hor, isticmaalka nidaamyadan oo aan lahayn xakameyn ayaa laga yaabaa in laga yareeyo fulinta codsiyada.
Isbedelka CRM ee isbedelka 2017 | Tababarka CRM
15 Shahaadooyinka Lacagta ugu Sarreysa ee 2017